(Aqriso) Liiska 202 kamid ah Xildhibaannada Baarlammaanka cusub oo lasoo gudbiyey, iyo 73 weli dhiman. | THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS WEBSITE	Stay Connected
(Aqriso) Liiska 202 kamid ah Xildhibaannada Baarlammaanka cusub oo lasoo gudbiyey, iyo 73 weli dhiman.
Liiska cusub ee Xildhibaannada Baarlammaanka ayaa 202 kamid ah la shaaciyey, Iyadoo weli ay dhiman yihiin 73 kale oo lafilayo in Beelaha ay ku dhiman yihiin ay soo dhameystiraan Saacadaha soo socda.
Xildhibaannada cusub ayaa waxaa ka dhex muuqda Xildhibaanadii hore qaar ka tirsan Wasiirrada Xukuumaddan haatan jirta, Iyo weliba Qurbajoog farabadan.
Sidoo kale waxaa ka dhex muuqda Guddoomiyihii hore ee Baarlammaanka Shariif Xassan Sheekh Aadan iyo xubno badan aad ugu dhowaa, waxana liiskan haatan la hayo uu muujinayaa in wax badan ay ka dhiman yihiin Beelaha badankood Xubnihii ay ku lahaayeen Baarlammaankan cusub.
Beesha Shanaad ayaa soo gudbisay tirada 23-xubnood, Beesha Daarood ayaa iyana soo gudbisay 40-Xubnood, Beesha Dir ayaa soo gudbisay 53-xubnood, Beesha Hawiyena waxa kaliya ee ay soo gudbisay 37-xubnood, Iyadoo Beesha Digil iyo Miriflena ay soo gudbisay 49-xubnood.
Afarta Beelood ee lagu sheegay Beelaha waaweyn ayaa laga rabay in ay min 61-xubnood soo gudbiyaan, Halka beesha Shanaadna laga rabay 31-xubnood, Waxana habka wax loogu qeybiyey ay tahay nidaamka 4.5ka, Waxana xusid mudan in Beelaha qaarkood ay gebi’ahaanba ka biyo-diidsan yihiin qaabka wax lagu qeybiyey oo ay ku hanjabeen in aysan soo gudbineynin wax Xildhibaanno ah..
HOOS KA AQRISO LIISKA XILDHIBAANNADA CUSUB.